कुटाइ खाने र भाग्नेको गनगन
सकेन र सायदै सक्ला भनेर विश्वास पनि म गर्न सक्दिनँ । मात्र यो बाटो पहिल्याउने एउटा स्रोत या बहानाबाजी हो, मेरो । सधैं दिनभरिको गन्थनले वाक्क भएर कहिले त यसो बाहिर जान मन लाग्छ, साथीहरू बनाउन मन लाग्छ, नयाा ठाउा हेर्न मन लाग्छÙ के गर्ने यो मन न हो । भाषाको ज्ञानबिना यो सबै कुरा कोरा कल्पना मात्र हो ।
- हरि कृष्ण न्यौपाने (घायल) ईराकमा नेपाली कामदारको अबस्था बिभिन्न म्यानपावर कंम्पनि ,स्वदेशि तथा बिदेशि दलाल अनि आफन्त मार्फत केहि बैधानिक र केहि अबैधानिक बाटो हुदैँ आ-आफ्नै तरिकाले राम्रो रोजगारीको आशा र धेरै पैसा कमाउने अनि आफ्नो परिवारको रेख-देख गर्ने प्रबल ईच्छहरु बोकेर आज ईराकमा दिन-प्रतिदिन नेपालीको संख्या बढ्नेक्रम जारि छ।
एकै दिन ३०—३५ जनाको चित्त बुझाउनुपर्थ्यो'
हामी दलित परिवार । आठजनाको ठूलो परिवार छ । खेतबारीको उब्जनीले खान पुग्दैन । लेबलानमा जागिर लगाइदिने भन्दै ३० पुस ०६४ मा सानीआमा काइँली घरमै आइन् । गाउँका अरू पनि जाने, पासपोर्ट बनाएको पैसा नलाग्ने, विदेश जान लाग्ने पैसा कमाएर तिर्ने बताएपछि परिवार राजी भयो । २ माघमा काइँला, काइँली र दावाले साथै लगाएर म, रिना, संगीता, मनु र सरितालाई राहदानी बनाउन चौतारा ल्याए । पासपोर्ट बनाएको पैसा पनि उनीहरूले नै तिरिदिए ।
पहिले बिक्री थिएन, अहिले भ्याइनभ्याई
भक्तपुर, भाद्र ३० आफूले घरमा बसेर टुकटुक गरी बनाएको कलाले स्थानीय बजार मात्रै देखिरहेको थियो । वषौँ यही पेशा बिताए पनि आफ्नो कलाले कुनै दिन अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पहिचान बनाउला भन्ने उनीहरूले कहिल्यै सोचेका थिएनन् ।
खसी काट्दा काट्दै उम्मेदवार ।
- ध्रुव दंगाल सिन्धुपाल्चोक । चौतारा गाविस ८ का रमेश श्रेष्ठ पेसाले मासुपसले हुन्, जो अहिले संविधानसभाका लागि उम्मेदवार बनेका छन् । सदरमुकामको सहिदचोकमा उनको मासुपसल छ । हरेक बिहान खुकुरीले मासु काटिरहेका भेटिने श्रेष्ठको खुकुरीसित अब अर्को सम्बन्ध गाँसिएको छ । उनले चुनावका लागि खुकुरी चुनाव चिह्न पाएका छन् । २७ वषर्ीर्य यी मजदुर सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र नं. २ बाट उम्मेदवार बनेका हुन् । 'संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च' नामक दलले उनलाई प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीको टिकट दिएको छ ।
देशमा शान्त्ति भइराखे हात गोडा चलुन्जेल पसिना बगाएरै खान पाईयोस ।
- राजन न्यौपाने जीवनको ५६ बसन्त सिन्धुपाल्चोकको डाँडाकाँडामा बिताएर हिडेका बाबुराम महतको थाप्लोमा अझै पनि गर्हुङ्गो भारीले छाडेको छैन । ठोकर्पा वडा नं. ६ (तत्कालिन बेखसिम्ले काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला) मा जन्मिएर धर्तीमा पाइला टेकेका उनीसँग भोटदेखि नुन खेपेको अनुभव छ । १८ बर्षको उमेरमा घरबाट भागेर मुग्लान पसेका उनीसँग कोइलाखानीमा काम गर्दाको दु:खको अनुभव पनि ताजै छ । हिन्दुस्तानबाट फर्केर ठोकर्पामा नै बसी जीवन चलाईरहेका उनको आजभोलीको जीवन अलि सुखद नै छ ।